သေရင် မီးခိုးနဲ့ပြာ . . . ပါသွားမှာက ကုသိုလ် အကုသိုလ် ~ ဒီမိုဝေယံ
သေရင် မီးခိုးနဲ့ပြာ . . . ပါသွားမှာက ကုသိုလ် အကုသိုလ်
နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီခန့်တွင် သန်လျင် ဖားအောက်တောရရိပ်သာ၏ ဘုရား၊ ရဟန်း၊ သိမ်၊ ကျောင်း ဒါယိကာမကြီး မိခင်ကြီး ဆရာကြီး အဘွားဒေါ်သုမေဓာ(ခ) ဒေါ်စိန်လင်း (ပငရွာ) အသက် (၈၅) နှစ်၊ ၀ါတော် (၂၀) သည် ၁၈.၁.၂၀၁၁ (အင်္ဂါနေ့) တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ ဈာပနအခမ်းအနားကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသူ/သားများ၊ ပုံတော်တင်ဆောင်ရန် ရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုသော အထူးနိဗ္ဗာန် မော် တော်ယာဉ်ကြီးတို့ဖြင့် သွားရောက်၍ ကူညီဖေးမ မီးသဂြိုလ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယင်း ဈာပနအခမ်းအနား သည် သန်လျင်နာရေးကူညီမှုအသင်းနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူမှုရေးသမားအချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်း အင်အားကို ပြသနိုင်ခဲ့သည်။
ယင်း အခမ်းအနား၏ ထူးခြားချက်မှာ ဆရာကြီး အဘွားဒေါ်သုမေဓာ (ခ) ဒေါ်စိန်လင်းကို သက်ဆိုင်ရာ သန်လျင်သုဿန်တွင် မီးသဂြိုလ်ခြင်း မပြုလုပ်ပဲ ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ခေါက်စေတီတော် မြတ်ကြီး၏ အနောက်ဘက်ဝင်းတွင် မီးသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း မီးသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် လောင်မြိုက်နေသော မီးတောက်များ၊ မိုးယံသို့ တက်သွားသော မီးခိုးငွေ့များ၊ လောင်ကျွမ်းသွားသော ရုပ်ခန္ဓာတို့၏ အနောက်ဖက် ခပ်လှမ်း လှမ်းတွင် ဖူးမြော်လိုက်ရသော စေတီတော်တို့ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်နှင့် . . .သေရင် … မီးခိုးနဲ့ပြာ ပါသွားမှာက … ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဟူသော စကားရပ်ကို ပြန်လည်၍ ကြားယောင်မိတော့သည်။